ဆုံဆည်းရာ: “ တောက်ချလို့မရတဲ့ တစ်မတ်စေ့ ”
“ တောက်ချလို့မရတဲ့ တစ်မတ်စေ့ ”
သိသိနဲ့အစားခံထားတာ ငတ်လို့မဟုတ်ဘူး ။
ပြန်လျော်ရတဲ့ပွဲမှာ ရေမြောင်းတစ်ခုပဲပိုင်တယ် ။
ပြန်လျော်ရတဲ့ပွဲမှာ သူရဲကောင်းဘ၀ကိုပိုင်တယ် ။
မြားတစ်ပြေးရဲ့လမ်းဟာ ရုန်းကန်မှုပိုဆန်မှာပေါ့ ။
ကျုပ်တို့ရဲ့ဝတ်စုံမှာ ရိုးသားခြင်းနံပါတ်တစ်ခုပဲပါတယ် ။
ပြားနှစ်ဆယ်လား ….. ရက်နှစ်ဆယ်လား
ကျည်ကာအင်္ကျီကိုဖြုတ်ချင်ဖြုတ် မဖြုတ်ချင်နေ
ဘယ်ကျင်းဝင်ဝင် ….. ဒါဟာတကယ့်လွတ်လပ်ခြင်းပဲ……။
၂၁ . ၆ . ၂၀၁၃
၁၁ : ၂၅ am
Posted by A'karikz Yannaing at 4:38 PM